के चुरोट सेवन गर्ने मानिसको वरिपरि बस्नेलाई पनि धुवाँले नोक्सान पार्छ? यस्तो छ रहस्य – Etajakhabar
के चुरोट सेवन गर्ने मानिसको वरिपरि बस्नेलाई पनि धुवाँले नोक्सान पार्छ? यस्तो छ रहस्य
ताजा खबर:- हामी मध्य अधिकांश मानिस सोच्ने गर्दछन् कि यदि तपाई धुम्रपान गर्ने मानिसको वरिपरी उभिनु भएको छ तर धुम्रपानको सेवन गर्नु भएको छैन भने यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन तर यो गलत कुरा हो । प्यासिभ स्मोकिंग या निष्क्रिय स्मोकिंग सक्रिय धुम्रपान भन्दा पनि बढी खतरनाक हुनसक्छ ।
धुम्रपान गर्ने मानिसहरूको वरिपरी रहने या प्यासिभ स्मोक, जसलाई सेकेन्ड-ह्याण्ड स्मोक पनि भनिन्छ, त्यो साइडस्ट्रीम र मेनस्ट्रीम मुख्यधारको धुवाँको मिश्रण हो । एक जल्दै गएको चुरोटको किनाराबाट निस्कने धुवाँ जसलाई चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिले भित्र तान्छ, त्यसलाई साइडस्ट्रीम भनिन्छ र जुन धुवाँलाई बाहिर फालिन्छ, त्यसलाई मेनस्ट्रीम धुवाँ भनिन्छ । सेकेन्ड-ह्याण्ड धुँवाको सम्पर्कमा हुँदा वयस्कको मुटु र रक्त वहिकामा सिधा प्रभाव पर्छ । धुम्रपान सेवन गर्ने मानिसको साथमा रहने मानिसहरूमा मुटु रोगहरूको खतरा लगभग २५% अधिक हुन्छ । साइडस्ट्रीमको धुवाँ लगभग ८५% सेकेन्ड-ह्याण्ड स्मोकको उत्पादन हुन्छ, जसमा मेनस्ट्रीम धुवाँको साथै विभिन्न केमिकल्स पनि हुन्छ, जसबाट धुवाँ बाहिर निस्किन्छ । यो कम तापमानमा जल्छ र जलन सफा एवम् पूर्ण हुँदैन । यसकारण धुम्रपान सेवन नगर्ने मानिसहरूमा पनि फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ ।
धुम्रपान र गर्भावस्थाको अवधिमा सेकेन्ड-ह्याण्ड स्मोकको सम्पर्कमा आउँदा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र व्यवहार सम्बन्धि समस्याहरूको खतरा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई जो समस्या हुन्छ, त्यही शिशुहरू र बच्चामा असामान्य ब्लड प्रेशर, फाटेको जिब्रो र ओठ, ल्यूकेमिया, इन्फेटाइल कोलिक, श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या, आँखामा समस्या, मानसिक कमजोरी, एकाग्रतामा कमी र अन्य शिक्षा र विकास सम्बन्धि समस्या आदि ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४ समय: २२:४८:११